UJoe Jonas, kutheni iinwele zakho ezintsha? | Amadoda aQinisekileyo
Isenokungabi yimvumi ethengisa ezona ngxelo zininzi, kodwa uJoe Jonas angasifundisa into okanye ezimbini, kwaye asithethi ngendlela yokuphuma nomnye wabasetyhini abahle kakhulu emhlabeni, uGigi Hadid, kodwa malunga Fihla isiqu esifutshane ngokusebenzisa iinwele.
Ukucheba kweemvumi kukude kakhulu phezulu kunasemacaleni. Xa imfutshane, iinwele ezinde emacaleni ziba zincinci. Ngaphezulu, nangona kunjalo, yenza ukuqhubeka okudala ukukhohlisa kokuba neesentimitha ezimbalwa ukuphakama. Kodwa ubude abonelanga, endaweni yoko Kuya kufuneka uyinike umthamo. Kwaye yiloo nto uJonas ayiphumezayo ngokusebenzisa i-toupee ye-hairstyle, ende kunye ne-voluminous, kodwa kwangaxeshanye igcina indalo enkulu, into ephunyezwa ngokusebenzisa isomisi emva kokuhlamba ngelixa kudlula ikama kwicala elithe nkqo. Emva koko faka i-hairspray elula ukuseta isitayile ngaphandle kokwenza kukhanye okanye kuncangathi.
Isitshixo sesibini kwimpumelelo yakho yeenwele silele ekusebenziseni ngobuchule idayi yeenwele. Ukutshintsha umbala weenwele kubangela ukuba abantu bajonge phezuluNgokukodwa xa kufikwa kwitoni ebethayo, iqhinga lokuba amadoda amafutshane akufuneki ajongele phantsi xa kufikwa ekunikezeleni imizimba yabo ngokuthe nkqo.
Kuninzi okutshiwo malunga neenwele eziluhlaza zikaJoe Jonas, kodwa enye inkcukacha engakhange iqatshelwe, kwaye esingathanda ukuyigxininisa, yinto yokuba emacaleni ebefuna ukugcina itan yakhe yendalo. Ngoba? Ngaba yinto elula? Ukujonga? Okucacileyo kukuba ii-stylists zeenkwenkwezi azishiyi nto ngamabona-ndenzile. Abacwangcisi beenwele bakhe bavumele lonke udumo ukuba luphumle kwi-toupee yakhe (ukuphakama, ivolumu kunye nombala) ngayo yonke injongo, kuba bayazi ukuba elona nxalenye liphezulu leenwele lelona dlelane lilungileyo lendoda emfutshane.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Isitayile esinenwele » Inwele entsha kaJoe Jonas inokukufundisa into okanye ezimbini
Iveki ivula iiGrammys ezisixhenxe kwaye inesitayile esihle
Imidlalo emihlanu etshisa iikhalori ngaphezulu kokusebenza